Addis Ababaan akkamiin filatte? – ዜና ከምንጩ
Addis Ababaan akkamiin filatte?
Hoganttummaa ola’anaa boordii fiilanno biyaaleessan fiilanaan waliigalaa 6ffa niigeggefama kan ittin jeedhame Waxabajji 14/2013 gaggefameera.boqonnaa jalqabaa kanaan naanoolee filannaan gutuummaan gutuutti itti gegefame kessaa tokko Addis Abebaedha.
Boordiin filannoo biyyalessa filanno waliigalaa 6ffa guyya tokkotti geggesuuf yaadee hojjachaa yoo turees rakko nageenyaa naannolee biyyatti tokko tokkotti mudateenif dhiimooleen maneetii murtiitiin qabaman xumuramuu dhabuusaaniitiin fiilannicha marsaa lamaan geggesuuf dirqameera.kanaaniis fiilannaan marsaa jalqabaa waxabajji 14/2013 geggefameera.Buu;chiinsa magaalaa Addis Abebatti rakkoleen mudatan dhibuusaaniitiin boordichii filannichii marsaa tokkon geggessu danda’era.
Finfinnetti filannoo waxabajji 14/2013tti geggefameen gaazexaan adis maalada buufataalee filanno garaa garaatti argamtte deemsa sagalee kennaa dawattetti .buufataalee filanna adis maaladaan dawattetti deemsa akkataa kenna sagalee taajjabdeetti .Adis maaladaan guyya filannon kuun geggefame gochaale gaggariifii dinqisiifatamuu malan ilaalttetti.ta;es garuu rakkoleen adeemsa filanno kana kessatti taajjabddes jira.
Adeemsa keenninsa sagalee kana kessatti wanttonni gaarii Adis maaladaa taajjabde giddudhaa hoobsaafii kuttenyummaan gochaa bayyewan biratti dinqsiifatamee ta’e darbeera.Boordiin filanno biyyalessa Itophiiyaa filannon waxabajji 14/2013 geggeffame ganama saatii 12 amma galgala saatii 12tti akka gaggeffamu karoorsee ture filannichii kan jalqabame .hata’u male filannon bulchiisa magaalaa Addis Abebatti geggefame sababi rakkole guyya sanatti mudataniinadeemsii kenna sagalee yeroo ka’ameefitti satii 12tti xumuramuu dhabuusaatiin amma halkan saatii 3tti akka itti fufu taasiifamuunwaa kan yaadatamuudha.
Haata’u male amma saatii sadiitti yeroo jiruu kessatti adeemsii sagale kennu hiin xummuramnne.Umanni magaalaa Addis Abeba deemsa sagalee kennu kanaan hiiriira roobaafii halkan guyyaa sanaa danda’e sagaleesaa kennera.dhiimoolee umata magaalaa Addis Abeba akka dinqisiifannu nuu taasiisan kessaa filataa guyya sanatti sagaleesaa kenne kessa dukana ittu hinsoodaatiin hiiriibasaa dhiisee amma halkan saatii 7tti eegee jiraataan sagaleesaa kenne jiraachuusaati.
Adeemsa sagalee kennu magaalaa Addis Abebatti mudatee kessatti harkkifanna mulatteen ittu hinnufiin amma halkan saatii 7tti buufataalee filanno ture sagalee kennusaa gorsiituu dhiimmoota komunukeshionii bordii filanno biyyaleessa Ittophiiyaa adde Soliiyanaa Shimallis mirkaneesee.kanaanis umanni magaala Addis Abeba roobnii dukkanni qorrifii hiiriibnni ittu isa rakkisanii filanno seenaa qabeessa geggesuusaatiin dinqisiifatamuu qaba jeedhan.
Filannon waxabajji 14 kanaan fiilannaawwan iddowwan biraarra adda kan taasiisuu guyya sanatti Addis Abebatti amma halkan saatii torbaatti turuun salphaa ta’u dhabuusaatii.akkuma beekamuu Addis Abebatti muuraasuumaanu ta’u iddowan tokko tokkotti halkaniin deemuun salphaa mitii.halkan saatii torbatti geejjibni idiilee miitii konkolaattonni tajajila gejjibaa Rayidii keenan hin argaman.Maarre umanni magaalaa Addis Abeba rakkolee kana hundaa dandamateefi sagaleensaa kan gatii qabuu ta’u beekee sagaleesaa kan itti amaneef kennera.
Rakkoleen filanno Addis Abebatti geggefame mudatan tokko tokko umata filataa rakkodhaaf yoo saaxilaniis filannon gatii akka qabuu qabatamaadhaan agarsiiseera.filannon baranaa jalqabuma deemsassaarra jalqabee kuutaalee hawaasaa tokko tokko birattimee dura filannichii haa darbuu asgaleewan jadhan dhagesiisuunsaanii hindagatamuu.
Yaadnii mee dura filannichii haadarbuu jeedhu akka ka’u wantootii taasiisan giddudhaa haala qabatamaa biyyatti kessa jiruufii haalii filannichii itti geggefamuu yaaddodhaaf kan nama saaxiiluu ta’unsaa akka ta’e namootiin bayye iratti walii galu .haalli qabatamaa yaaddo ta’e ture akkuma jiruutti ta’e Addis Abebatti amma ammaatti rakkon tasgabbi akaakuu kamiiyyu hin mulanne.
Karaa gara biraa fiilannaa waxabajji 14/2013 geggefameeratti adis maaladaan wantti agartee hiirrinawan biraa jiru.Adis maaladaan guyyaa sanatti kuutaalee magaalaa lamatti buufataalee filanno saddettitt haala adeemsa filanno jiru ilaalttetti kutaalee magaalaa kanatti hiriinawan argite kessaa inni tokko hiiriina waraqaa sagalee mana maree naannof sagalee itti keenan ture.kanaaniis buufataaleen filanno yammu rakatan taajjabddetti.
Bordiin filanno biyyaleessa ibsa gaazexumma kennen Addis Abeba dabalatee nannolee biraarattis hiiriinni waraqaa sagalee akka ture ibseera.Hiiriinni waraqaa sagalee itti kenanii Addis Abeba mudate adeemsii sagale kennu amma halkan saatii 7tti akka dheeratu sababbiwan taasiisan kessaadha.
Boorddichii ibsasaatiin akka beeksiiseetti ganama barii saatii 12tti buufataaleen banamuu qaban ittu hiin banamiin hafaniiru.Adis maaladaan rakkon kana walii walqabate taajabdde buufataaleen filanno dafanii banamuutti dabalee buufataalee filanno tokko tokkotti raawachiifttonni filanno bordiichaan ka’aman ittu hin argamiin hafuusaanii ture.Adis maaladaaf bufata filanno tokkotto raawachiifttonni filanno shan ka’amanii tokko kessa hafuusaatiin hirinni raawachiiftootaa mudachuu ilaalttetti.
Sababbi kanaan raawachiifttonni filanno buufata filanno sanarra turan arfan deemsa sagalee kennu kana sirritti geggesuu yemu dadhaban ilaalttetti deemsa kanaaniis rakko hubannaa dhabuu iruu gargaaruudhaaf hirrinni humna namaa rakko ta’e ture.
Bordiin filanno jalbultii filannotti akka beeksiiseetti filataan kardiin filanno jalaa bade dhiimasaa bordii filannotti hubachiisuudhaan malatto ittin bekummasaa agarsiisuudhaan akasuumas galmee filattummaaratti yoo maqaansaa jiraate dhiimiichii qaboo yaiitiin qabamee akka filattu taasiifama jeedheera.Haata’u malebuufataalee filanno Adis maaladaan ilaala turttetti ajaja boordiichaa ala hojjatamaa tureera.
Bufataalee filanno tokko tokkotti filattota kaardiin filanno jalaa badee raawachiifttonni filanno qaboo ya’ii tokkon male yamuu filachiisan warren tokko tokkommo wareen kaardiin filattummaa jalaa bade akka hinfilannee taasiisanii yamuu deebisanifii filattonni kardii fidanii dhufan ergii filatanii booda maqaasaanii mirkaneesiinee booda filachiifna sababii jedhuun sagalee kenan saanduuqaan ala yammu ka’an hubatameera.
Rakkon biraa Adis maaladaan buufataalee filannotti hubattefii qaamoolee koomee dhaggefataniira mirkaneesiite waraqaa sagalee kennu mana maree naanno dadachasanii kennu yammu ta’u kanaaniis filattonni beekaas ta’e ittu hinbeekiin isa dachaafamee itti kenamee irruma kessaa filachuutuu mulata ture.Adis maaladaan komii dhaggefattotarraa akka dhageseetti yoo ta’e koomee rakiniichaa fuudhanii sirrefamnii akka iratti taasiifamuu murttessu isaaniitti.
Karaa garabiraa filannoo Addis Abebatti rakkolee guyya sanatti mulatan kessa rakko hubanna filatootaatii.rakkon kuun buufataalee filanno heddutti mulatee ture.filattonni yammu filachuudhaaf gara bufata filanno seenanitti akkamiin akka filatan rakkachaa akka turan Adis maaladaan dawattetti.Kessummaa waraqaa sagalee kennu mana maree naanorratti lakkofsii kaadhiimamtootaa heddumachuun filattota rakisaa tureera.
Rakkon hubanna filattotaa raawachiiftoota filannoratti dhiibba hojii hiinmale yammu uumuu Adis maaladaan taajjabddetti.Raawachiifttonni fiilanno sababe rakko hubanno filattotaa amma bakka dhooksaan sagaleen itti keenamuu filattota waliin yammu deeman mulateera.
Bordiin filanno niyyalessa akka jedhuutti yoo ta’e filattonni sagalesaanii kennuf qofaasaanii galuu qabuu yoo kannen degarsa barbaadan ta’e malee enyuu bufataalee filanno Adis maaladaan dawattetti filattota hubachiisuufis ta’e kaayyo biraatiif eaawachiifttonni filanno filattota waliin bakka sagaleen iciitiidhaan kenamuu waliin seenuu yeroo daddabalamaa.
Waluumaa galatti deemsii fiilanno Addis Abebatti ture rakkolee muuraasa eeramaniin ala jirattonni magalatti ‘’mee filannichii haa darbuu’’jeedhe aka yaada;e ittu hinta’iin karaa nagaa geggefameera.bordii filanno biyaaleessa dabale umanni Addis Abeba hobsaafii sirnaan filachuunsaa akka dinqsiifatamuu taasiiseeraan.Finfinnon waxabajji 14 filattetti bu’a filannosheefii mo’ataa ishee bulchuu bordii filanno biyyaalessarra beekuudhaaf eegaa jrtii.
Total views : 6982584